Cuntada ayaa soo saartay bogga ugu sarreeya ee shabakada
Dad badan ayaa ka hela xogta shabakada goosashada sida farsamooyinka muhiimka ah ee helitaanka macluumaadka. Waa suurtogal in la ururiyo macluumaadka bogga sida bogagga shabakadda iyo qeybaha gaarka ah ee bogga. Caadiyan, tani waa geedi socodka jilicsan ee laga yaabo inay ku lug yeeshaan isticmaalaha si ay u badbaadiyaan bogag shakhsiyeed ee goobta - temperature remote control. Mid ka mid ah waxaa laga yaabaa inuu ubaahan yahay nambar ku filan oo ku habboon si loo isticmaalo habka loo isticmaalo. Barnaamijka "Software scrapper" wuxuu awoodi karaa inuu sameeyo hawl ballaaran oo xog ururin ah oo ku lug leh malaayiin bog oo hal maalin ah. Intaa waxaa dheer, qalabkaan waxay u adeegi karaan in ay automatate qaar ka mid ah jadwalka ururinta xogta, samaynta ururinta wararka waxtar leh.
Mashiinka maadada caadiga ah ee shabakada ah wuxuu u dhacaa sida taranka caadiga ah. Goobahaasi waxay booqdaan boggaga internetka sida boodhadhka dhabta ah, samaynta codsiga server waxay u egtahay inay ka imanayso booqde bini'aadam. Waxay ku badbaadin karaan isticmaalaha waqti badan iyo sidoo kale wanaajinta qeexitaanka xogta la ururiyey. Badankood oo software ah waxay leeyihiin interface user-saaxiibtinimo. Dadka haysta barnaamijka ugu yar ama eber-ka ah ayaa waxay awood u yeelan karaan inay qabtaan hawl ama laba isticmaalka waraaqaha shabakadda. Isticmaalida Macluumaadka Webka
Webka Muuqaalka Muuqaalka Webka waa qalab wax lagu nadiifiyo webka kaas oo awoodi kara inuu fuliyo dhamaan hawlaha muhiimka ah ee xog ururinta. Laga soo bilaabo website-ka caadiga ah, waxaa suurtogal ah in la soo saaro xogta wakhtiga dhabta ah iyo weliba macluumaad kale sida faahfaahinta alaabta, boggaga gaarka ah, filim ama macluumaadka heesaha, mawduuca, qiimaha suuqa / saamiyada suuqa. Dadka ka shaqeeya adeegyada SEO waxay awoodi karaan inay adeegsadaan qalabkan si ay u helaan macluumaadka tartanka sida farsamooyinka suuq geynta iyo weliba macluumaadka bogga bogga. Qalabkani wuxuu leeyahay interface oo isbedbedeli karo, la qabsoomi karo, oo si ballaaran u kordhinaya muuqaalka muuqaalkiisa. Waxaad awood u yeelan kartaa in aad soo ururiso wax kasta oo ah boggaga internetka ee nooc kasta.
Si loo helo uruurinta macluumaadka dhakhsaha badan iyo hufan, Qalabka Macmiilaha Webka wuxuu ka kooban yahay boot awood leh kaas oo ururiya macluumaadkan. Waa lagama maarmaan in la aqoonsado qiyaasta saxda ah, saxnaanta, iyo kartida waxqabadka qalabkan uu qaban karo hawshiisa. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu daro ama laga saaro qaybo ka mid ah goobta aad u baahan tahay inaad hesho. Shaqadani waxay ku dhici kartaa nidaamka isku-habboon ee URL. Tusaale ahaan, waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho xaanshiyaha buug-yaraha ee bogga si loo ururiyo macluumaadka meta ama qaybo gaar ah oo ka mid ah bogga.
Soo saarida awoodaha
Si ka duwan qalabyada ururinta xogta caadiga ah, mid waxay awood u yeelan kartaa in lagu kaydiyo xogta bogagga siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, mid ayaa ka gedisan kara macluumaadka bogga oo u kaydsan sida CSV ama faylka qoraalka. Waxaad sidoo kale ku dhoofi kartaa HTML ama XML. Xogtan waxaa lagu hayn karaa xogta xaafadda ama xitaa dhoofinta meel fog. Xogta MySQL waxay ku xirantahay noocyo kale oo ka mid ah xog-ururinta adduunka oo dhan. Intaa waxaa dheer, dadka isticmaala waxay soo dejin karaan bogga oo dhan (ama qaybo) oo ku keydso meel kayd ah oo maxalli ah.